Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iindaba zeGrenada Breaking » IGrenada Underwater Sculpture Park igqibezela ukulungiswa
Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Caribbean • inkcubeko • Iindaba zikaRhulumente • Iindaba zeGrenada Breaking • iindaba • abantu • Resorts • Xanduva • Tourism • Iindaba zeWired Travel
IGrenada Underwater Sculpture Park igqibezela ukulungiswa.
Ufakelo lubandakanya imifanekiso eqingqiweyo engama-82 enobungakanani bobomi ebonisa inkcubeko yaseGrenada kwaye yenziwe ngokusuka kwiintlobo ngeentlobo zemithombo yeendaba kodwa ubukhulu becala isuka kwi-substrates elula kuquka ikhonkrithi. Benza i-substrate efanelekileyo, engatshintshiyo kwaye isigxina, apho ubomi baselwandle bunokukhula khona.
IGrenada Underwater Sculpture Park yavulwa ngo-2006 kwaye yayiyeyokuqala ngqa kulo lonke ihlabathi.
Le paki yabonwa ngumkroli waseBritani uJason deCaires Taylor kwaye iyafikeleleka kubo bobabini abarhubuluzi be-snorkelers kunye nabatshuzi.
IGrenada Underwater Sculpture Park bubutyebi belizwe kwaye ukugcinwa kwayo kubalulekile ekugcinweni kokutsala okumsulwa kwamanzi aseGrenada.
IGrenada Tourism Authority (GTA) yazisa namhlanje ukuba iprojekthi yokulungiswa kwe Ipaki yaseGrenada phantsi kwamanzi eMifanekiso (USP), ebekwe kude noNxweme oluseNtshona lwaseGrenada kwiNdawo eKhuselweyo yaseLwandle yaseMolinere Beauséjour, igqityiwe.
Ibhengezwe njengomnye weMimangaliso engama-25 ePhakamileyo yeHlabathi yiNational Geographic, le paki yabonwa ngumzobi waseBritane uJason deCaires Taylor kwaye uyafikeleleka kubo bobabini abaqhubi be-snorkelers kunye nabatshuzi. I Ipaki yaseGrenada phantsi kwamanzi eMifanekiso yavulwa ngo-2006 kwaye yayiyeyokuqala ngqa emhlabeni. Iye yaba yenye yezona ndawo zithandwa kakhulu kwindawo ekuyiwa kuyo.
Ufakelo lubandakanya imifanekiso eqingqiweyo engama-82 ebonisa ubomi Grenada inkcubeko kwaye zenziwe zisuka kwiintlobo ngeentlobo zemidiya kodwa ubukhulu becala zisuka kwiisubstrates ezilula eziquka ikhonkrithi. Benza i-substrate efanelekileyo, engatshintshiyo kwaye isigxina, apho ubomi baselwandle bunokukhula khona.
Omnye wemifanekiso eqingqiweyo edumileyo yepaki yiVicissitudes, isangqa samanani angama-28 aphuma kubantwana basekhaya baseGrenadi abadityaniswe ngokubambana ngezandla. Ezinye iziqwenga eziphawulekayo ziquka “uMbhali Olahlekileyo,” indoda esebenza kumatshini wokuchwetheza phezu kwedesika egqunywe ngamaphephandaba embali; “Sienna,” umfanekiso oqingqiweyo obonisa inkangeleko entle yomsuki oselula osuka kwibali lasekuhlaleni elithandwa kakhulu; kunye "noBuso be-TAMCC," uthotho lobuso obulingana nobomi obubonakala bubunjiwe kwintsimbi yelitye elikhulu lekorale elibandakanya abafundi bekholeji yasekuhlaleni.
Ngokuhamba kwexesha, ipaki eqingqiweyo iye yachatshazelwa ngamandla endalo endalo. Ngaloo ndlela ukugcina ingqibelelo yayo, iinzame zokubuyisela zaqaliswa ukuze kugcinwe ukufaneleka kokusingqongileyo kunye negalelo kubomi obuninzi baselwandle ezizisayo. Ezi nzame zahluka ukusuka ekulungiseni nasekucoceni izakhiwo ezithile ukuya ekususeni nasekufudusweni kwezinye.
"Le Ipaki yaseGrenada phantsi kwamanzi eMifanekiso bubutyebi besizwe kwaye ukugcinwa kwayo kubalulekile ekugcineni umtsalane omsulwa we Grenadaemanzini,” utshilo uPetra Roach, iCEO, iGrenada Tourism Authority. “Iyilwe ngendlela entsha ukuba isebenze njengolwalwa olungengowamvelo, ipaki iye yatsala uluhlu olumangalisayo lwezidalwa ezahlukahlukeneyo zaselwandle kulo mmandla ukusukela oko yafakwa kwaye yabonelela ngomphezulu ukuze i-coral ikhule-eyona nto ibalulekileyo ekugqibeleni kwiinzame zethu zolondolozo kunye nokuzibophelela ekulweni nolwandle. ukonakala kobushushu behlabathi. Thina kwiGunya lezoKhenketho laseGrenada siza kuqhubeka sithethelela kwaye sixhasa iiprojekthi ezinjalo ukuze siqinisekise ukuba indawo ekusingwa iyasebenza kunye neenzame ezizinzileyo.